Uvimba weNdalo weGesi
Udidi: Gas Natural
Imizabalazo yegesi yendalo yokuNabisa ngaphaya kokuNganyangeki!
Irhasi yendalo iyarhweba ngokuluhlaza okwe-2.660 izama ukubaleka kuluhlu oluncinci. Ixabiso liphukile ngaphezulu komgca we-downtrend obonakalisa ukuba sinokubuyela umva ngokukhawuleza kwixesha elifutshane.
Isenzo sexabiso sibonakalise ukukhula okunokubakho, kodwa sisafuna isiqinisekiso esomeleleyo ngaphambi kokuthatha indawo ende. Ukuguquguquka kuphezulu kule nto yorhwebo emva kokusilela ukufikelela kwindawo ephezulu ephezulu.
Uhlalutyo lobuchwephesha beGesi yendalo H4!
Ngokobuchwephesha, ukuphakama okuphezulu okuphezulu, ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwamanqanaba oxhathiso lwexesha elikufutshane kunokubonisa ukukhula okuqinileyo ngaphambili. IGesi yendalo ibuyile kwixesha elifutshane ukuze kuvavanywe kwaye kuphindwe kuphindwe indawo yepivot (2.595), umgca owaphukileyo we-downtrend, kunye nomgca ophakathi (ml) ngaphambi kokutsiba phezulu kwakhona.
Ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwe-2.696 yangaphambili ephezulu, ngaphaya komgca ophezulu we-median (uml), kwaye nge-38.2% kunokuqinisekisa ukuqhubeka kokunyuka kwitshathi ye-H4. Isimo esinyusiweyo sinokungavunyelwa ukuba amaxabiso ehle ngezantsi komgca ophakathi (lml) nangaphantsi kwe-S1.
Uxinzelelo lokuthengisa lusephezulu, yiyo loo nto kufuneka silinde amaxabiso ukubhalisa indawo ephezulu ephezulu, ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezulu kwe-38.2% (2.707) nangaphaya komgca ophezulu we-median (uml) ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuhamba ixesha elide.
tags irhasi yendalo, Uhlalutyo Technical